Kooxda Comsed FC oo u safreyso Mugdisho
Waxaa markii ugu horreeysay ka safraysa Puntland koox kubadda cagta ah,taaso ku siijeeda magaalada Muqdisho si halkaasi ay uga soo ciyaaran ciyaaro saaxibtinimo oo ay la leeyihiin kooxaha heerka koobad ee ka dhisan magaalada Muqdisho.
Maalmo kaddib ayaa la qorsheynaya in kooxda kubada cagta Comsed Club oo ka dhisan magaalada Gaalkacyo,kana mid ah kooxaha heerka koobad ee Puntland inay u dhoofan Muqdisho.
Kulamo saaxibtinimo ayaa la sheegaya inay Muqdisho kula soo ciyaari doonan kooxaha heerka koobad ee kala ah Elman iyo Dekadaha,sidana waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha kooxda Comsed C/qani Khaliif Carabey oo isagu dadaal u galay sidii ay u dhici lahayd in koox Puntland ka
socota ciyaaro heer caalami ah ku soo ciyaarto magaalada caasumada ah ee Muqdisho.
"Dadaal dheer ayaan u galney sidii ay ku suurobi lahayd in ciyaaro
koox Puntland ka socoto ku yeellato Muqdisho, waa buug cusub runtii waxaa na soo gartay goor dhaweyd war qad codsi ah oo an gudbinay jawaabteda,xiriirka kusbadda cagta Soomaaliyed
ayaana si weyn u soo dhaweeyey in Comsed oo ah koox ciyaaryanaha
wanagsan ay u ciyaaran inay ka soo ciyaarto Muqdisho,casumaad ayaan ka helney kooxaha Elman iyo Dekadaha iyaga ayaana la soo ciyaareyna"ayuu
yiri guddoomiye Carabay oo la hadlay puntalndi sidoo kale waxaa uu guddoomiyuhu farrin u diray wasaarada cusub ee cayaaraha iyo dhallinyarada Puntland iyo dowladda faderaalkaba,waxaana uu sheegay inay tahay qeyb ka mid ah hormarka dalka haddii ay ka
shaqeeyan oo ay taageeran kooxa dalka ka dhisan.
Guddoomiye C/qani Khaliif Carabey waxaa uu sidoo kale ugu baaqay qurba jogta Puntland iyo Soomaalida kalaba inay taageero uga baahan yihiin maadaama Isbortisku uu yahay is dhex-galka bulshada. "Qurba jogta waxaan farayna inan taageero uga baahahanay tallabaadan
oo an muddo ka shaqeynayey waa mid waxbadan ku soo kordhinaysa dhallinyaada Soomaaliyed,waxaana u sheegena inan heer wanagsan jogno qorba jogta hana taageerto,shacabka Puntland ayaan baaq midka la mid ah u diraya,Comsed lama oranayo waa koox iyo Gaalkacyo ka socota laakin magaca Puntalnd ayey ku socota waana muhiim inad na
taageertan."ayuu yiri Carabey.
Mulkiilaha kooxda kubadda Cagta ee Comsed Dr Dhaga-Cadde ayaa fududeeyey in kooxdiisu u safarto iyagoo adegsanaya dhinaca duulimadka Muqdisho.